Farqiga u dhexeeya dagaalkii ssdf iyo snm la gashay dawladii dhexe, waxaa waxyeelo badnaa kii ssdf aragtidayda.
Ssdf waxuu target'keedu ahaa beshii siyaad barre, ayagoo aan kala sooci jirin inuu geel la joogo iyo inuu wasaarad u shaqeeyo
Halkaas waxaa kasoo baxay askar iyo saraakiil beeshii siyaad barre oo ayaguna qanuunka gees maray dhibna gaystay.
Snm waxay ku dhex degaalantay caruurtooda, marnaba meel banaan ma istaagin.
Mujaahid oo dhan wuxuu soo baxay markii dawladii dhexe ka baxday muqdisho.
Gabadhaan allaha soo hadeeyo waligeed wax ma jeclaan sida ka muuqata, waana xag jir aad u fog.
Hadalkeeduna wuxuu ku qotomaa, qori iyo qiiqiis waa laysla tuuraa, mana kala jecla siyaad barŕe iyo cadde muuse.
Snm waxay ingiriiska iska shabahaan, ama isaga egyihiin labaduba ayagoo hoosta kaa neceb yaad ku dhex noolaan kartaa.